Shiinaha wajiga maaskaro KN95 warshad iyo soosaarayaasha | Gubang
Maaskaro badbaado leh
Maaskaro wajiga KN95
Qalabka neefsashada ee qayb ahaan loo yaqaan 'KN95' ayaa loogu talagalay inuu gacan ka geysto bixinta ka hortagga walxaha aan saliidda ku saleysneyn, ee ka yimaada shiididda, ciideynta, miinshaarrada, ama howlaha kale ee boodhka ah. Waxay sidoo kale kaa caawin kartaa yareynta soo-gaadhista neefsashada qaybo ka mid ah maaddooyinka bayoolojiga ah.
La kulan GB2626-2006, GB2626-2019 HEERKA
Laba dhegood oo dhegaysan oo dhejisan ayaa bixiya shaabad ammaan ah
Naqshad khafiif ah oo loogu talagalay raaxada weyn
Ku guuldareysiga inaad raacdo dhammaan tilmaamaha iyo xaddidaadaha isticmaalka qalabka neefsashada iyo / ama ku xirnaashaha qalabka neefsashada inta lagu jiro dhammaan waqtiga soo-gaadhista waxay yareyn kartaa waxtarka neefsashada waxayna sababi kartaa jirro ama dhimasho.
Timaha wajiga, gadhka iyo astaamaha wajiga qaarkood ayaa yareyn kara waxtarka qalabka neefsashada.
3.Hubi xaaladda neefsashada ka hor adeegsi kasta, si loo hubiyo inaysan jirin godad ku yaal aagga neefsashada oo aan wax dhaawac ah dhicin. Isla markiiba beddel qalabka neefsashada haddii uu waxyeello gaadhay.
4. Ku keydi qalabka neefsashada meelaha wasakhaysan marka aan la isticmaalin.
5. Isla markiiba ka tag aagga wasakhaysan oo la xiriir kormeeraha haddii dawakhaad, xanaaq, ama dhibaato kale dhacdo.
Qodobada halista u noqon kara caafimaadkaaga waxaa ka mid ah kuwa aad u yar oo aadan arki karin.
7.Soo bandhigida alaabada la isticmaalay iyadoo la raacayo qawaaniinta lagu dabaqi karo.
1. Qalabka neefsashada ma keenayo oksijiin. Ha u isticmaalin hawo ay ku jiraan wax ka yar 19.5% oxygeon.
Qalabka neefsashada waxaa loogu talagalay inay adeegsadaan shaqo / xirfadlayaal ay leeyihiin dadka waaweyn, kuwaas oo si habboon loogu tababaray isticmaalkooda iyo xaddidaaddooda. Jawaabayaasha looma qorsheynin inay adeegsadaan carruurta.
3. Ha badalin, ku xadgudbin ama si xun u isticmaal qalabka neefsashada. Ha ku xidhin qalabka neefsashada aagga neefsashada, oo ay ku daboolan tahay maro-gacmeed ama maro-gashi.
Ha u isticmaalin qalabka neefsashada marka isku-uruurinta waxyaabaha wasakhda ah aan la garanayn ama ay markiiba khatar ku yihiin nolosha iyo caafimaadka.
Qalabka neefsashada kaama ilaalinayo gaaska sunta ah ama uumiga, ha u isticmaalin qiiqa qiiqa ama jawiga sunta ah.
6. Ha isticmaalin haddii qalabka neefsashada lagu wasakheeyey gudaha.
1. Ku guuldareysiga inaad raacdo dhammaan tilmaamaha iyo xaddidaadaha isticmaalka alaabtaan waxay yareyn kartaa waxtarka neefsashada waxayna sababi kartaa jirro ama dhimasho
2. Qalabka neefsashada ee sida saxda ah loo xushay ayaa muhiim u ah ilaalinta caafimaadkaaga
3. Badeecadani ma bixiso oksijiin
4. Ha isticmaalin marka isku-uruurinta wasakhda ay markiiba khatar ku yihiin caafimaadka ama nolosha
5. Ha u isticmaalin meelaha qarxa
Magaca Badeecada: Neefta Gaaska ah
Waxyaabaha Sifeeyaha: Sifeeyaha Farsamada iyo Electrostatic
Heerka Ilaalinta: KN95
Xirashada: Nooca dhegaha xiran
Sawirka Sanka: Aluminium oo wata Bar Bar Caag ah (ku gabow maaskaro)
Hore: Maaskaro wajiga KN95 oo leh waalka
Xiga: Maaskaro wajiga KS-9008
Maaskaro Weji Ce Kn95
Maskaxda Wejiga Ce Kn95
Maaskaro Wejiga Kn95
Maaskarada Wajiga Kn95
Maaskaro Ffp2 Kn95
Maaskarada wajiga loo yaqaan 'Kn95'
Maaskaro wajiga KN95 oo leh waalka
Maaskaro wajiga KN95 oo madaxa lagu dhejiyo
Kunshan Gubang Qalabka Aaladda Teknolojiyada Co., Ltd.Cinwaanka: Dhismaha 13, No.169 Wadada Shimeng, Magaalada Qiandeng, Magaalada Kunshan, Jiangsu, Shiinaha
Tel / Fakis: 0086-512-57576086
Gaarka ah Español Servicio